Tronsmart dia manolotra tolotra manokana amin'ny 11 sy 12 Novambra miaraka amin'ny 70% | Vaovao momba ny gadget
Tronsmart dia manolotra tolotra manokana amin'ny 11 sy 12 Novambra miaraka amin'ny 70%
Miguel Hernandez | 05/11/2021 08:14 | General, About us
Tronsmart, orinasa manam-pahaizana manokana momba ny feo izay miditra hatrany amin'ny tsena mamy toy ny feo tsy misy tariby miaraka amin'ireo karazana safidy hafa. Vao haingana izahay no nandinika ny sasany amin'ireo vokatra mahaliana indrindra ary nasehonay anao izy ireo mba hahazoanao hevitra momba ny kalitao sy ny asany.
Tronsmart dia manambara tolotra super roa andro amin'ny 11 sy 12 Novambra izay ahafahanao mividy ny fitaovana tsara indrindra misy fihenam-bidy hatramin'ny dimampolo isan-jato. Fantaro miaraka aminay hoe inona ireo tolotra mahaliana ireo, aza adino, ary araraoty ny fihenam-bidy izay hitranga amin'ny AliExpress.
Raha te hahita ny tolotra vokatra Tronsmart rehetra, afaka miditra amin'ny fampiroboroboana voafetra ianao amin'ny fanaovana tsindrio eto.
Ohatra, écouteur Tronsmart Onyx Prime izay manana feo famaritana avo noho ny processeur Qualcomm QCC3040 sy ny codec aptX dia manolotra amin'ny alàlan'ny Bluetooth 5.2 traikefa feo avo lenta miaraka amin'ny fizakan-tena mihoatra ny efapolo ora (anisan'izany ny fiampangana natao tamin'ny raharaha): Ireo écouteur izay manana vidiny mahazatra 107,20 euros dia hitentina 53,50 euros fotsiny amin'ny AliExpress mandritra ny fifanarahana super Tronsmart, izay midika fihenam-bidy mihoatra ny 50%. Afaka mividy azy ireo ianao izao avy eto.
Ny ankamaroan'ny tolotra dia hifantoka amin'ny écouteur amin'ny 11 Novambra, rehefa ho hitantsika ny voalohan'ny Apollo Air, fitaovana misy fanafoanana ny tabataba mavitrika hatramin'ny 35 dB amin'ny fitambarany miaraka amin'ny elanelana samihafa. Manana fanafoanana cVc 8.0 mavitrika izy ireo izay ahafahanao mifantoka amin'ny kalitaon'ny mozika tsy misy fanelingelenana ivelany, ka miteraka fitokanana saika tanteraka. Tena mahaliana ho an'ny mpitaingina bisikileta sy mpihazakazaka izany satria izy ireo dia hanao ny làlany mifantoka amin'ny zavatra mahaliana azy indrindra, ny fanatanjahan-tena. Amin'ity tranga ity, ny Apollo Air avy amin'ny Tronsmart izay mitentina manodidina ny 70 euros, dia mitentina 37,81 euros fotsiny., fihenam-bidy tena izy manakaiky ny 60 isan-jato izay mety tsy tianao ho diso ary azonao araraotina tsindrio eto.
Mandritra izany fotoana izany, ny modely Onyx Ace, écouteur semi-in-sofina ho an'ireo izay tsy mifanaraka amin'ny maodely intra-aural, dia manolotra fihenam-bidy mahaliana ihany koa ao amin'ireo Tronsmart Super Deals ao amin'ny AliExpress, mahita ireto écouteur misy rafitra mpamily mikrôfo efatra. kalitao avo lenta ary mazava ho azy ny processeur Qualcomm mba hanolotra ny kalitao tsara indrindra amin'ny resaka feo.
Mazava ho azy fa manana fihenam-bidy lehibe 57% ireo, dia mitentina 24,70 euros monja amin'ity vidin'ny fampiroboroboana ny AliExpress ity. Afaka miditra amin'ny tolotra ianao tsindrio eto. Azo antoka fa vidin'ny knockdown ho an'ny headphone True Wireless sasany izay sarotra hita raha jerena ny antoka kalitao natolotr'i Tronsmart.
Saingy tsy ny zava-drehetra no ho écouteur, misy ihany koa ny lavaka ho an'ny mpandahateny, manomboka amin'ny iray amin'ireo modely manaitra indrindra, ny MegaPro, fitaovana manana fomba fampitoviana telo samy hafa amin'ny alalan'ny bokotra tokana. Izy io dia mamela ny fampiarahana amin'ny alàlan'ny rafitra fifandraisana mandroso ary manana hery hatramin'ny 120W miaraka amin'ny fahafahana manolotra feo 3D virtoaly. Amin'ity tranga ity dia mahazo fihenam-bidy 30% izahay, noho izany dia hijanona amin'ny 81,04 euros fotsiny izany, fahafahana tena tsara azonao atao araraoty eto.
Ny tolotra farany fa tsy noho io antony io no tena mahaliana indrindra dia ny fanamafisam-peo tsipìka 1, izay manana mpamily roa sy radiatera passive mba hanolotra fampisehoana tsara amin'ny alàlan'ny rafitra stereo 15W amin'ny heriny manontolo amin'ny alàlan'ny rafitra DSP misy patanty, izay mahatonga antsika hahazo fampitoviana tsara sy feo samihafa mba hanomezana traikefa fihainoana tsara indrindra. , noho izany, noho ny fahaizany manohitra dia mety ho mpiara-dia tsara amin'ny antoko rehetra, ankehitriny miaraka amin'ny fihenam-bidy 35% dia hijanona amin'ny 23,58 euros fotsiny miditra ity pejy tolotra ity.
Araraoty ny Super Deals an'i Tronsmart ao amin'ny AliExpress ary aza adino ny fotoana hahazoana vokatra tsara indrindra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Tronsmart dia manolotra tolotra manokana amin'ny 11 sy 12 Novambra miaraka amin'ny 70%
Soundcore Liberty 3 Pro dia safidy vaovao miaraka amin'ny ANC sy famaritana avo
Amazon Fire TV Stick Max, miaraka amin'ny WiFi 6 sy HDR ankehitriny